တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ကိုဖွင့်ဖို့5BEST အကြောင်းရင်းများ
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုဖွင့်ဖို့5အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်း
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အတွက်ထိပ်တန်း5အကြောင်းပြချက်အောက်ပါအတိုင်းနေကြသည်:
ဤအအကြောင်းရင်းများအားလုံးကျန်းမာဘဏ္ဍာရေးအစုစု၏အခြေခံမူလအမြစ်ဖြစ်၏။ ဤအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. အသစ်အဘယ်အရာကိုမျှမရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့, အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှု-ပျော်ရွှင်ရာသီဥတုနှင့်အတူသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေး၏အခြေခံဒြပ်စင်တွဲဖို့ကိုစတင်ပါ။ ထိုအခါဤလောကကိုအစိုးရသောပြည်နယ်ယနေ့ကြည့်ပါ။ အလင်းထဲမှာ,5အဓိကအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့် ကမ်းလွန်ဘဏ် ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်စေမည်ဒါကြောင့်လူကြိုက်များသည်။
"ယနေ့ငါနှင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာချင်တဦးတည်းစကားလုံးရှိတယ်ဆိုပါကဤအဖွင့် ... Glocal ။ " ဟုအဆိုပါရုပ်ရှင်ထဲကနေ -Natalie Keener အဆိုပါလေတပ်အတွက် Up ကို
ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းများအတွက်ထိပ်တန်း5အကြောင်းရင်းများ
1 ။ ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းသည်
အမေရိကန်သည်ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့တစ်ခုတည်းသော 4.4% ရှိပါတယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်သို့သော်ကြောင့် 80 ကမ္ဘာ့ရှေ့နေများ၏% နှင့်ကမ္ဘာအားလုံးကိုတရားစွဲမှု၏ 96% ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်လူမျိုးသန်းပေါင်းများစွာလိုပဲ, သင်နေ့တိုင်းတရားစွဲမှုများ၏အန္တရာယ်နှင့်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သင့်ကားနှင့် drive ကိုသို့အရတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ သငျသညျသစ်တစ်ခုဖောက်သည်အပေါ်ယူအခါတိုင်းသင်သည်အလားအလာရှေ့နေရဲ့ခြေသည်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျောထုတျ။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်အခါတိုင်း, သင့်ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်မနှင့်အတူ, တကလည်ချောင်းနာဥပဒေရေးရာစစ်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ, လူ့သတ္တဝါဥပဒေများရေးသူဖြစ်ကြ၏။ ဒါဟာကောင်းကင်ပြာအချို့တရားမျှတပြီးပဲအင်အားသုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ဥပဒေများရေးသူမြား၏သိမ်းပိုက်၏ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးပါ။ နိုင်ငံရေးသမားများ။ အဘယ်သူကိုအများစုဟာရှေ့နေများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဥပဒေများရေးလိုက်သောအခါ, သငျသညျမိမိတို့အလုပ်အကိုင်၏အကြိုးအတှကျသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သူတို့အားရေးထင်ပါသလဲ ဒါကြောင့်အဘယျအကျနော်တို့ယူဆရန်ရှိသည်ကဤဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ခြေတံရှည်အများပြည်သူစိတ်ရင်းရုံရှက်သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသူသို့မဟုတ်သူမ၏လက်အားရတဲ့ရှေ့နေများ၏မျက်နှာသာအတွက်ဥပဒေများ, လွှတ်တော်ဥပဒေများတိကျမ်းစာ၌လာသည်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေပြုအမတ်များအဓိကရည်ရွယ်ချက်အဖြစ် "တရားမျှတမှု" နဲ့ဥပဒေများရေးခဲ့ပါဘူး။ အများစုမှာဥပဒေများအဓိကအားဖွငျ့ရေးသားထားသောနှင့်ဥပဒေရေးရာအလုပ်အကိုင်အဖွဲ့ဝင်များ၏အကျိုးအတွက်နေကြသည်။
ကျနော်တို့လုံးဝတရားစွဲမှုတစ်စီးရီးအားဖြင့်ထိခိုက်သူတစ်ဦးယခင်ကချမ်းသာကြွယ်ဝ client ကိုခဲ့ရသည်။ သူကတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ဘဏ်မှာဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ မိမိအန်ထမ်းတစ်ဦးသည်သူ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ, သူ့၏ဖောက်သည်တစ်ဦးမှဘဏ်ကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ client ကိုရဲ့ဝန်ထမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုလည်းဘဏ်၏ဒါရိုက်တာခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ဘဏ်အိမ်ခြံမြေပျက်ကျမှုအတွက်ပျက်ကွက်သည့်အခါကသူ့ဖောက်သည်လိမ်လည်မှုဘို့ငါတို့ client ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
သူတို့ကကိုယ်တော်ကြောင့်ဘဏ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုရဲ့အနေအထားကိုသိပါစေရန်သူ၏ဝန်ထမ်းရဲ့အမှတ်တမဲ့ပျက်ကွက်သူ့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုထည့်သွင်းသောကွောငျ့သူ၏အအာမခံပေါ်လစီသည်သူ့ကိုခုခံကာကွယ်ရန်ငြင်းဆန် "လိမ်လည်မှု။ " ဒီဘဏ်ကသူ့အနေအထားအဘို့အဘယ်အရာကိုမျှမပေးဆောင်။ သို့သော်ကယ်လီဖိုးနီးယားတရားရုံးချုပ်ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ $2+ သန်းတရားစီရင်ခြင်းကိုအတည်ပြု။ ကံကောင်းထောက်မစွာသူ့ကိုကျနော်တို့အရပ်ဌာန၌တစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်ကိုထားတော်မူ၏။
တိုက်ပွဲများ၏ငါးနှစ်ပြီးနောက်သူဒေဝါလီခံဘို့အရွေးချယ်။ သူကပဲဂုဏ်ယူစွာကောလိပ်မှတဆင့်မိမိသမီးကိုထားခဲ့ကြောင်းနှင့်သူ၏ဇနီး, သားနှင့်အဖြားနာသူတို့မိခင်ထောက်ခံခဲ့သည်။ မသာဒေဝါလီခံဂေါပကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ရှေ့နေချချည်ထားမဟုတ်အရာအားလုံးသူ့ကိုအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်သူသည်သူ၏ဇနီးကလေးများနှင့်မိခင်တရားစွဲ။ သူကသူတို့ကြိုတင်လေးနှစ်ကာလအတွင်းသူ့ထံမှလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးမည်သည့်ထောက်ခံမှုများအတွက်သူတို့ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
မှန်ပါသည်, ဒေဝါလီခံဂေါပကသူပြင်းထန်သောဖြစ်ခဲ့သည်စသည်တို့ကိုသူမ၏ဖခင်ကောလိပ်များအတွက်သူမ၏ပေးဆောင်ငွေသူ၏သမီး, အိုးအိမ်, အစားအစာ, တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ လုံးဝအရမ်းဒေါသထွက်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူမ၏မိဘများသူမ၏ပညာရေးဆီသို့ paid ပမာဏကိုများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူ၏သမီးတရားစွဲဆိုနိုင်သော "တရားမျှတသော" လား? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ညာဘက်မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုရှေ့နေများကတစ်စုံတစ်ဦး၏အိတ်ကပ်ထဲမှာမိမိတို့လက်ရကွောငျးအဘယျ ups လေးသာမှု?" ထိုမေးခွန်းကိုမေးမကြာခဏပညတ်တရားကိုသင်တို့အားရေးသားခဲ့သည့်လမ်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ အိုးလမ်းဖြင့်, ဒေဝါလီခံဂေါပကအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရှေ့နေလုယူသောဥစ္စာ၏သုံးပုံတစ်ပုံရတယ်။
ဒီနေ့ရဲ့မူဝါဒများသို့ရေးသားထားသောခြွင်းချက်တစ်ငါးစာနှင့် switch ကိုလိမ်လည်မှု၏ဒဏ်ငွေပုံနှိပ်ဖို့သဘောမသက်ရောက်ဖြစ်ကြသည်။ client များမင်ျဂလာပုံပြင်များနှင့်အတူချေါသောအခါကျနော်တို့ထပ်တလဲလဲကမြင်ကြပြီ။ ရှေ့နေများမကြာခဏသုံးကြိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေါင်းရှေ့နေများအခကြေးငွေစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့လိမ်လည်မှုတစ်ခု inkling ရှိကွောငျးကိုတစ်ဦးရော်ဘင် hood ကိုတရားသူကြီးစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်လျှင်သူတို့ကဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့မကြာခဏ, ထိုတရားစွဲဆိုမှုအတွက်လိမ်လည်မှုအကြောင်း line သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်ပစ်တရားဝင်သို့မဟုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီတော့မသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ဝန်ခံ, တဦးတည်းဧကန်အမှန်ဤသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လာမယ့်သင်တရားစွဲဆိုမည်သူမှကြွလာသောအခါမရေရာအပေါ်ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။ တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ကိုဖွင့်။ တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင့်ကိုကိုင်ထားပါ။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံ keepsake တစ်လမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သင်ကသောငျးကဥပဒေရေးရာရှုခင်းကိုသင်အကျိုးသက်ရောက်စေမည်မဟုတ်ဟုသိမှတ်ညမှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်။
2 ။ ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုး
တစ်စုံတစ်ဦးကတရားစွဲလျှင်သင်နှင့်တရားစွဲဆိုမှုချက်ချင်းသင့်ရဲ့အမေရိကန်ဘဏ်အကောင့်အားလုံးဘယ်အရာကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီး? အဘယ်အရာကိုပိုက်ဆံသင်ကိုယ်တိုင်ခုခံကာကွယ်ဖို့သုံးပါမလဲ? ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်မလဲ ကျနော်တို့ကကန်ထရိုက်တာသူသည်ကုမ္ပဏီ၏တွဲဖက်ရှိသည်။ အပြာရောင်ထဲကတစ်ပြည်နယ်အေဂျင်စီသည် လာ. သူ့အဖမ်းခံရနှင့်သူ၏န်ထမ်းခြောက်။ အဲဒီနောကျသူတို့ကသူ၏ဘဏ်စာရင်းအပေါငျးတို့သ froze; အားလုံးတစ်ဦးအသေးအဖှဲအလုပ်သမားလျော်ကြေးအာမခံချိုးဖောက်မှုများအတွက်။ သူတို့ကစာသားသူတို့မှားဘာမှလုပ်ခဲ့မျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။
သူကတစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော်သူကပင်မိမိကိုမိမိကိုကယ်တင်ရန်ဖို့ပိုက်ဆံမှအဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာသူပင်အရင်းအမြစ်များကိုသူ့ကိုကိုခုခံကာကွယ်ရန်ရှေ့နေငှါးရန်ရှိသည်မပြုခဲ့ဟုမပါဘဲတတ်၏။ အမေရိကန်တရားသူကြီးများကအခြားနိုင်ငံများတွင်အကောင့်ထဲမှာပိုက်ဆံပေါ်မှချက်ချင်းညှပ်ထားရန်အခွင့်အာဏာမရှိကြပါဘူး။ ဘဏ်ကိုအမေရိကန်အကိုင်းအခက်သက်ဆိုင်ရာရှိသည်ဟုမပါဘူးဆိုရင်ဒါဟာအထူးသဖြင့်အမှုဖြစ်၏ ပိုပြီးဒီတော့တစ်ဦးသင့်လျော်ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတှငျကငျြးပခဲ့ပါ။
ကမ်းလွန်အချို့ပိုက်ဆံရှိခြင်းသင်တစ်ဦးလက်မ၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအားဖြင့်သင်တို့ကို squishing ထံမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အာဏာကိုပေးသည်။ ဒါဟာမဟုတ်မမှန်သင်သည်စွပ်စွဲနေတဲ့ဥပဒေရေးရာရန်သူသို့မဟုတ် overzealous အရာရှိတဦးကဟန့်တားကူညီနိုင်သည်။ ဒီကာကွယ်ရေးမရှိရင်သူတို့ရုတ်တရက်သူတို့ရဲ့သနားခြင်းကရုဏာအလဲရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်, သင်အောက်ကနေကော်ဇောဆွဲထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာထိန်းချုပ်မှု၌သင်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် Hard-ရရှိခဲ့ပြီးငွေသား၏ကားမောင်းသူရဲ့ထိုင်ခုံ၌သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
အပိုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Options ကို
အခြားမှတ်စုတွင်, သငျသညျပြီးသားလာမည့်ဘဏ္ဍာရေးကွေး၏ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြားနည်းလမ်းနှင့်သင့်ပိုက်ဆံကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ပိုကောင်းနည်းလမ်းတွေရှာကြသည်လျှင်သင်များပါတယ်။ CNN က, MSNBC, Fox ကဘလွန်းဘာ့ဂ်သို့မဟုတ် YouTube ကို: တူသောနှင့်အညီ, ဖွယ်ရှိထက်ပိုပြီး, သင်မကြာခဏသတင်းချန်နယ်လ်။ သငျသညျစီးပွားရေးခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်၏ပြည်နယ်၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်ရှောက်ရန်သူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုငျသညျ။
ထိုကဲ့သို့သော Warren Buffett က, ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့နှင့်ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အဖြစ်ဗိုလ်မှူးဘဏ္ဍာရေးကစားသမား Burry (မြို့၏ Capital ၏တည်ထောင်သူ, LLC) ကို 2008 အမေရိကန်အိမ်ရာပျက်ကွက်၏တစ်ခုတည်းသောခန့်မှန်းအနည်းငယ်ရှိကြ၏။ သူတို့ကလာမယ့်ဂရိတ်စီးပွားပျက်ကပ်နှင့်အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ၏ပြိုကျသတိပေးချက်များဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကလက်ရှိကစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြော, ဒါပေမဲ့သူတို့လာသောအခါမသိရပါဘူး။
သငျသညျပြီးသား Buffett, Soros ၏နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်အမေရိကန်ဘဏ်များထွက်ငွေကိုယူပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူတို့အမေရိကန်ကလူအပေါ်ကျူးလွန်သည့်လောဘနှင့်လိမ်လည်မှုကနေအများကြီးသင်ယူကြပြီမဟုတ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်သေးသည်အခြားဘဏ္ဍာရေးအာမခံငွေများမျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်ရှိ may မဟုတ် အမေရိကန်အစိုးရပေးစေခြင်းငှါမလုံလောက်သောပိုက်ဆံရှိစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမေရိကန်အစိုးရကအာမခံထွက်စေသတည်း။
အမရေိကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးကြွေးမြီနှင့်အတူနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကြွေးမြီကိန်းဂဏန်းအစဉ်မပြတ်ကမ္ဘာ၏သမိုင်းအတွက်မဆိုတိုင်းပြည်များကစုဆောင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့သင်ကခြေရာခံနိုင်မည့်ဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ် အမေရိကန်ကြွေးမြီ အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်။ ကျွမ်းကျင်သူများကပိုက်ဆံ၏ပမာဏကိုပင် 40 နှစ်များတွင်ပြန် paid မရနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်း။ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာကျနော်တို့အနေနဲ့ ISDA ထရေးဒင်းသဘောတူညီချက်ကင်းမဲ့သောသမ္မာသတိရှိကြလော့အဖြစ်မှန်ရင်ဆိုင်ရရမယ် ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမှ privy နိုင်ပါတယ် ကြီးမားသောယောက်ျားလေးများ. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်လုပျနိုငျလာမယ့်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုအတွက်သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့ဖြစ်တယ် ကမ်းလွန်အကောင့်။
3 ။ Sounder ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်
On ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးအဘယ်သူမျှမကအမေရိကန်အခြေစိုက်ဘဏ်များကြီးတွေ-အမည်ကိုဟုခေါ်တွင် '' s ကိုလတ်တလောအစီရင်ခံစာ, "ကမ္ဘာ့ 50 လုံခြုံဆုံးဘဏ်များ," ပင် list-မဟုတ်တဦးတည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 50 ဘဏ်များထဲကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသာစာရင်းတွင်သုံးခုရှိပါတယ်။ #30, #45 နှင့် #50 မှာအဆင့်သုံးအသေးစားစိုက်ပျိုးရေး-based ဘဏ်များကဖွဲ့သောတစ်ခုတည်းသောအမေရိကန်ဘဏ်များရှိကြ၏။ ကျရှုံးဖို့အရမ်းကြီးမားတဲ့: တစ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများပေါ်ပေါက်ဖို့ခန့်မှန်းကြောင်းခါနီးပျက်စီးခြင်းကိုဖော်ပြရန်ကြီးတွေကိုအမေရိကန်ဘဏ်များနှင့် တွဲဖက်. အချို့အသုံးပြုမှုရှိပါသည်။ ဒါဟာအမှန်တရားကနေနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဘဏ်တွေဖြစ်လာစတင်ပြီးတာနဲ့ ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသော ကြောင့်ရီစရာမြင့်မားသောကြွေးမြီမှ (အကြွေးတွေဆပ်ဖို့မတတျနိုငျ) နှင့်အစိုးရအာမခံငွေများအဘို့ဤအချိန်ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်နေရာမှာရှိခြင်း, သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ သွားကြောင်း။
အဆိုပါဘဏ်များသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြွေးမြီပေးဆပ်ရန်သင့်ငွေစုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ရုံမကြာသေးမီကဂရိနိုင်ငံဖြစ်ပျက်လိုပဲဘဏ်တွေကိုပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ မကျန်ပိုက်ဆံရှိလိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီနောကျ, သင် ATM စက်များကနေပိုက်ဆံယူနိုင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တဦးတည်းမှားယွင်းစွာ "အင်းငါမူကား yonder ကျော်ငါ့ပိုက်ဆံသွင်းထားနှင့်တူညီသောအရာဖြစ်ပျက်လျှင်?" လို့ပြောစေခြင်းငှါ
ကျနော်တို့အတွက်လာဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ဤလောကအတွက်အပြင်းထန်ဆုံး, လုံခြုံဆုံးဘဏ်များသုတေသနနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးအများဆုံးအကြံပြုချက်များပါစေ။ ဘဏ်များရုံ nanosecond အတွက်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောရန် "အလုံခြုံဆုံးကမ်ဘာပျေါတှငျ" စာရင်းထဲကခုန်ကြပါဘူး။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့တဦးတည်းကို "အလုံခြုံဆုံး" စာရင်းတွင်ဘဏ်ထဲမှာတစ်ဦးကံဇာတာမပေးရရှိထားသူဆိုရငျကော ထိုအခါဘဏ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံး In-ကြွေးမြီနိုင်ငံအတွင်းရှိကားအဘယ်သို့လျှင်? အခုတော့ကြောင်းအစစ်အမှန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။
အတော်များများကအဓိကဘဏ္ဍာရေးကစားသမားများနှင့်စီးပွားရေးပညာရှင်များပြိုလဲဒေါ်လာစျေး၏သတိပေးကြပါတယ်။ ဤသည်ပြိုကျကြွေးမြီများ၏နက္ခတ္တဗေဒပမာဏ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ရေနံစျေးနှုန်းနှင့်ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းကများဆွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုအရ သောမတ်စ် Metcalf, စီးပွားရေးပညာရှင်, stockbroker နှင့်အွန်လိုင်းဘဏ္ဍာရေးက်ဘ်ဆိုက်, Zack များအတွက်ပံ့ပိုးစာရေးဆရာ, "ငွေကြေးဖောင်းပွမှုများအတွက် Federal Reserve ရဲ့ပစ်မှတ်မှုနှုန်း2ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းက၎င်း၏ပစ်မှတ်ကိုအောက်တွင်ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ဖွင့်ကောက်နေ၏လက္ခဏာမပြသသောအခါ, Federal Reserve နှင့်အများအပြားစီးပွားရေးပညာရှင်များအလေးအနက်စိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကျဆင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီပေမယ့်သုညကိုအောက်တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်လျှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုမမေးလို့ရပါတယ်။ ဒါကစီးပွားရေးပညာရှင်များ '' စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်၏။ "
မကြာခဏအမေရိကန်ဘဏ်များမှနီးကပ်စွာချည်ထား, တစ်ဦးကြီးများ, အမေရိကန်ဘဏ်နှင့်မကိုအမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာပွဲစားမထားတဲ့ဘေးကင်းဆိပ်အတွက်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံထားပါ။ ဥပဒေရေးရာ, လုံခြုံ၌သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုတစ်ဦးသောအဘို့ကိုမျိုးစုံ, ကမ်းလွန်အကောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုံခြုံဆုံးဘဏ်များ၏တဦးတည်းအတွက်။
4 ။ ယုတ်လျော့အားနည်း
တဦးတည်းခြင်းတောင်း၌သင်တို့၏ကြက်ဥအားလုံးထားဘူး။ သင်ပြုလျှင်သင်သိသိသာသာသင့်ရဲ့ငွေကြေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆုံးရှုံးသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်။ ဒါကြောင့်, သင်မည်သည့်အချိန်တွင်တရားစွဲစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်တစ်ခုသိမ်းပိုက်၌ရှိကြ၏လျှင်, သူတို့သင်တို့ဆီသို့ချိတ်ဆက်မရနိုငျတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရာအရပ်မှအချို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမရွှေ့ဖို့ကောင်းတယ်။ သငျသညျတစ်ခုတည်းဖြစ်ကြပြီးတစ်မိသားစုရှိသည်သို့မဟုတ်သင်မယ့်တိုးတက်သောတွေးခေါ်လျှင်, ကမ်းလွန်ပိုက်ဆံချပြီးသင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအားနည်းချက် minimize လုပ်ဖို့အလွန်စမတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်, လက်ထပ်နေတယ်ဆိုရင်။
အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေများအတွက်ဂရုမစိုက်။ သို့သျောထိုသူတို့အပေါ်ရှောက်သွားတစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့အကြွေးတွေအပေါငျးတို့သချွတ်ဆပ်ဖို့ငါတို့အမွေသုံးစွဲဖို့လိုအပျကွောငျးမဆိုလိုပါ။ အဆိုပါကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေကွယ်လွန်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကွယ်လွန်သူကိုခစျြ-သူတွေကို '' အကြွေးတွေများအတွက်ပေးဆောင်တာဝန်ရှိသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုအားဖြင့်ကျင်းပကာကမ်းလွန်အကောင့်အတွက်မိသားစုကငွေချထားပေး, ချစ်ရသူတစ်ဦး၏အသေခံခြင်းလိုက်သုတ်ခံရမှသင်၏သားဦးအရာကိုကာကှယျနိုင်ပါတယ်။
5 ။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု
Doug Casey, ဘဏ္ဍာရေးစာရေးဆရာနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-စျေးကွက်စီးပွားရေးပညာရှင်အမေရိကန် (အများကျဆုံး) နှင့်ရောမအင်ပါယာ၏ကျဆုံးခြင်းအကြားစိတ်အားထက်သန်အပြိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကာဇီကပြောပါတယ်, "ကျနော်တို့က entropy အရာအားလုံးအောင်နိုင်သူနှင့်အချိန်ကျော်အားလုံးစနစ်များကိုနိမ်ဆင်းလေကြောင်းကိုရရှိထားသူဖြစ်သောအပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်၏ဒုတိယနိယာမရှောင်လို့မရပါဘူး။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးစနစ်တခုဖြစ်လာကြောင်းနှင့်, ထိုထက်ပိုသောစွမ်းအင်အဲဒါကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြာပါသည်။ အဆိုပါပိုကြီးပြီးပိုမိုရှုပ်ထွေး, အပြန်အလှန်, ထိုသို့ဖြစ်လာ interdependent, ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ကြောင့်ပျက်ပြားခြင်းနှင့်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာပျက်ကွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ပါဝင်သည်။ "
ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့က "အဘယျသို့တက်သွားသည်ကိုဆင်းလာရမည်ဖြစ်သည်။ " နာမည်ကျော်ဂီတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, သွေး, ချွေးနဲ့မျက်ရည်ကိုးကားနိုင်ပါတယ်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ + ဒေသခံ = "Glocal"
ခေါင်းစဉ် George Clooney သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး 2009 ရုပ်ရှင်ရှိပါတယ် အဆိုပါလေတပ်အတွက် Up ကို။ အထဲတွင်, ရည်မှန်းချက်ကြီးလူငယ်တစ်ဦးကိုသွား-getter, အန္န Kendrick နေဖြင့်ကစားနာတာလီ Keener, ဟူသောဝေါဟာရကို "glocal ။ " ဖျောပွထားမစ္စတာ Clooney အပါအဝင်အန်နာရဲ့အကွီးအကဲမြား, ဤအသုံးအနှုန်းအားဖြင့်စိတ်မပျက်နေကြသည်။ အန္နပြီးနောက် "glocal" နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်၏ပေါင်းစည်းမှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောသစ်ကိုဝေါဟာရများကြောင်းရှင်းပြသည်။
Glocal ကမ္ဘာကြီးကိုကြောင့်နည်းပညာ, အခမဲ့ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ခြုံငုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြံထက်မှသေးငယ်ကြောင်းပြသသည်။ အဆိုပါလှည်းပေါ်ခုန်နှင့်သင့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုတိုးချဲ့ရန်, ဒါမှမဟုတ်ကျန်ရစ်ရဖြစ်စေ။ ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်အတွက် glocal အတွေးအခေါ်တော့ဘူး-ကအစွန်းဖြတ်တောက်မဟုတ်ပါထားရှိခြင်းသည်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ် သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုထပ်တိုးဖို့ရာအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောနဲ့အသံနည်းလမ်းများပေးပါသည်။
အမေရိကန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်ဝေးလွန်းပရိယာယ်, လိမ်လည်မှု, ခြယ်လှယ်များနှင့်ခိုးဝှက်ရှိခဲ့သည်။ တူညီသည့်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကစားသမားများနှင့်ဗဟိုဘဏ်အဘို့အမှန်သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်ယခုတင်ပြသောဘဏ္ဍာရေးကိစ္စများပေါင်းစပ်ရင်ဆိုင်နေရ '' glocally ။ ' ဤသည်ကအခြားဘဏ္ဍာရေးပြိုလဲများအတွက်စုံလင်သောမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းစေသည်။
အရေအတွက်ကိုသို့မဟုတ်အထောက်အပံ့နှင့်အကူအညီကိုအဘို့ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြည့်စုံစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံကိုခေါ်ပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့စဉ်းစားပါနဲ့ box ကို-and ထင်တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာပြင်ပတွင်ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏တစ်ဦးသားကောင်ဖြစ်လာမထားပါနဲ့။ မျိုးစုံနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေအချို့ကိုကိုင်။
> ကျအခနျး3မှ